Honda Scoppy အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Thu Ya Aung
..please admin..အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ..
.. ဒီတစ်ခါတော့ onekyats' က ဘော်ဒါတွေ အတွက် အပေါ်ဘီး အမှန်လေး တစ်စီးနဲ့ အထူး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
.. honda scoppy 2014 9' လ.
killo - 6000' ကျော်.
price - 850000(အပိတ်).
.. အပေါ်ဘီး အမှန်/အသန့်လေး ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် အတွက်တော့ မြေမနင်းသားလေးပါ .. အော်ပစ္စည်း အစုံ နဲ့ အော်သော့နှစ်ချောင်းလည်း ပါဝင်ပါ့မယ်.
အနာအဆာကင်း error' လည်းရှင်းပြီး လက်တင်တန်းစီးရုံပါ..
.. အဲဒီ့တော့ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ နောက်မကျစေရန် အတွက် hello' လေးတစ်ချက် လုပ်ပြီး အားပေးကြပါဦး ..
.. ဘားအံမြို့ နယ်တွင် ဘီးကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး နယ်ဝေး သူငယ်ချင်များ အတွက်လည်း အာမခံဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်..ထို့အပြင် အခြားသော
ယိုးဒယား(ထိုင်)Auto' မော်ဒယ်နိမ့်/မြင့် များလည်း
ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်း ဝယ်ယူ အားပေးနိုင်ပါကြောင်း..လေးစားစွာဖြင့် ...
"... ph - 09 402 171 423 ..."
အမည်: Honda Scoppy